Just waiting for Sandy – Thet Nandar
Just waiting for Sandy
Sandy ကို စောင့်ဆိုင်းရင်း အမှတ်တရ ပိုစ့်တင်လိုက်ပါတယ်။
အိမ်ဘေးနားက Maple သစ်ပင်ပါ။ မနှစ်က ဒီနေ့လို နေ့ရက်မှာ အရွက်တွေ ရှိပါသေးတယ်။
ဒီနှစ်တော့ တပင်လုံး အရွက်တွေ တရွက်မှ မရှိတော့ဘူး။ လေတိုက်လို့ လွှင့်ကြွေကုန်ပါပီ။
မြန်မာမှာ နေတုန်းကတော့ လပြည့်ကျော် တရက်ဆိုရင် ဒီရေ တက်လို့ တရုတ်တန်း ဆိပ်ကမ်းနား နီးတဲ့ မြေညီထပ် အိမ်တွေဆိုရင် ရေတွေတောင် ၀င်တယ်။ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းက ရေတွေ တက်လာပါတယ်။
မနှစ်က အချိန် နာရီ တနာရီလျှော့တာ မီးပျက်နေလို့ အမှတ်တရ ပိုစ့် မတင်လိုက်ရပါဘူး။
ဒီနှစ်လည်း Sandy ကြောင့် Connecticut မှာ မီးပျက် .. မပျက် မသေချာသေးဘူး။
အခု လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်ကျော် … မနက် ၂ နာရီ ရောက်ရင် အချိန် ၁ နာရီ လျှော့တာမို့ … မနက် ၁ နာရီ ဖြစ်သွားပါမယ်။
ကွန်ပြူတာ နှင့် ဟမ်းဖုန်းက အော်တို ပြောင်းပေးလိမ့်မယ်။
လက်ပတ်နာရီ နှင့် အိမ်မှာ ချိတ်တဲ့ နာရီ .. မိုက်ခရိုဝေ့ နာ၇ီတွေကတော့ ကိုယ်ဘာသာကို လိုက်ပြောင်းရလိမ့်မယ်။
အမေရိကားမှာ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ မနက် ၂ နာရီက ၂ ကြိမ် သွားဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
အဲဒီ ညဆို ကိုယ်တို့တွေ အိပ်ချိန် တနာရီလောက် ပိုအိပ်ရလိမ့်မယ်။
ည ၉ နာ၇ီ အိပ် .. မနက် ၅ နာရီ ထ .. အိပ်ချိန် – ၈ နာရီ မှာ အဲဒီည ဆို အိပ်ချိန် ၉ နာရီလောက် အိပ်လို့ရတယ်။
Daylight saving time ( + 1 hour ) ends on Sunday, November 4, 2012 at 2:00 AM in USA ( East )
Current time zone : UTC -4 hours
Standard time zone : UTC -5 hours
We’e ready for hurricane Sandy – grill machine and charcoal, but we haven’t use it for 1 year. We have full oil in the car, save pure water, food, medicine, passport, ID card, insurance card, money, hp, camera, candle, light, clothes and hygiene items.
credit : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4845900349138&set=o.118071565920&type=1
Hurricane Sandy remainsaCategory 1 and has left over 1 million people from North Carolina through New Hampshire without power.
credit : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151065518486198&set=a.120815726197.112340.58785311197&type=1&theater
This picture was shared by Jackie, who said “trampoline in power lines ,Milford , CT”. Photo credit goes to Twitter user @courtmcmanus
credit : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151043219045736&set=a.155755875735.121669.48010180735&type=1&theater
credit : http://www.youtube.com/user/TheWeatherChannel?v=yXMU2qwCVag
credit : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=484889831544652&set=a.135073019859670.15958.133773903322915&type=1&relevant_count=1&ref=nf
ပင်လယ်ထဲကနေ ငါးတွေ shark တွေလည်း တက်လာနေပါပြီ။
credit : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=424359987617526&set=o.90119719152&type=1
Here is the latest outage map from CL&P. Check your town. If you are without power, it may be some time before you get it again. We’re quickly approaching 500,000 outages statewide
credit : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151218724814330&set=a.165223639329.117272.53587699329&type=1&theater
Credit from Facebook & Twitter
ကိုယ်တို့နေတဲ့ နေရာက တောင်တွေပေါ်မှာမို့ အခုထက်ထိတော့ ရေလည်း မလျှံသလို .. မိုးလည်း မသည်းဘူး။ လေတော့ တိုက်တယ်။ မီးမပျက်သေးဘူး။
ည 8:30 PM, 10/29/2012
October 29, 2012 Thet Nandar	connecticut, family memories, food, sandy, thiriyatanar